အချိန်သိပ်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်(၁၅)မိနစ်စာ အဆီကျအကြောပြေလေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး - Real Gaming Myanmar
သာမန်လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့မှာ ၈ နာရီလောက် အလုပ်လုပ်ရင်းအချိန်ကုန်ကြပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်း တခြားလုပ်စရာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးဖို့တော့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်အလုပ်တွေလုပ်ပြီး အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်၊ ပင်ပန်းပြီး မလုပ်ချင်တော့တာရယ်ပေါင်းသွားပြီး ဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုပြင်ပြီး ရေရှည်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မတက်အောင် ထိန်းထားဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပြီး အခုဖော်ပြမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပုံမှန်လုပ်သွားပေးလိုက်ပါ။ ရေရှည်အတွက်ကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမို့ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် …. ။
အရင်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလည်းဖြစ်၊ နှလုံးကြံ့ခိုင်မှုလည်းတိုးစေတဲ့ လှေကားအတက်အဆင်းလုပ်တာကို ၁၅ မိနစ်လောက်လုပ်ပေးပါ။ ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်ပေးစရာမလိုဘဲ လှေကားပေါ်အတက်အဆင်း ၁၅ မိနစ်လောက်ပုံမှန်လုပ်ပေးရုံနဲ့ တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ ဗိုက်အဆီတွေပါသိသိသာသာကျသွားပြီး ကျစ်လစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် …. ။
ပထမပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပါ။ ခြေထောက်တွေကို ဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး ဒူးကိုပြန်ကွေးကာရင်ဘတ်ဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါကို အကြိမ် ၂၀ ၊ သုံးခေါက်လုပ်ပေးပါ။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေတာကြောင့် အညောင်းအညာတွေပြေစေတဲ့အပြင် ခြေထောက်လေးတွေကိုလည်း သွယ်လျလှပစေပါတယ် …. ။
ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဘေးတိုက် မြှောက်၊ချ အကြိမ် ၂၀ လုပ်ပါ။ ဘယ်၊ညာတလှည့်စီလုပ်ပေးရုံနဲ့ ခါးအညောင်းပြေစေပြီး ခါးဘေးကအဆီတွေကိုလည်းကျသွားစေတာကြောင့် ခါးသေးချင်တဲ့သူတွေလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် …. ။
ပက်လက်လဲအိပ်နေတဲ့အနေအထားကနေ ခြေထောက်တွေကို တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ဘက်ကိုမြှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကျောကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချပြီး နဂိုအနေအထားအတိုင်းရောက်အောင်ပြန်နေပါ။ အဲ့ဒါကို အကြိမ် ၂၀ သုံးခါလုပ်ပေးပါ။ နောက်ကျောဘက်အညောင်းအညာတွေပြေစေပြီး ခါးနောက်က အဆီတွေကျစေပါတယ် ….. ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတင်ပါးဆုံနေရာမှာ အားပြုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကို V ပုံစံဖြစ်အောင်နေပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းပြီး လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုကပ်ထားပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ဘယ်လှည့်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပြီးရင် ၊ ညာဘက်ကို ထပ်လှည့်ပြီး နဂိုအနေအထားအတိုင်းပြန်နေပါ။ဘယ်ညာတလှည့်စီ အကြိမ် ၂၀ လုပ်ပေးပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်တဲ့အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီး အဆီပိုတွေကျစေပါတယ် …. ။
သာမနျလူတဈယောကျက တဈနမှေ့ာ ၈ နာရီလောကျ အလုပျလုပျရငျးအခြိနျကုနျကွပွီး ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှောလညျး တခွားလုပျစရာတှလေုပျရငျးနဲ့ အခြိနျကုနျတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အခြိနျပေးဖို့တော့ မနေ့တေတျပါတယျ။ တဈနကေုနျအလုပျတှလေုပျပွီး အခြိနျမပေးနိုငျတာရယျ၊ ပငျပနျးပွီး မလုပျခငျြတော့တာရယျပေါငျးသှားပွီး ဖွဈသလိုနတေတျတဲ့အကငျြ့လေးကိုပွငျပွီး ရရှေညျကနျြးမာရေးကောငျးဖို့၊ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျမတကျအောငျ ထိနျးထားဖို့အတှကျ တဈနကေို့ ၁၅ မိနဈပဲအခြိနျပေးပွီး အခုဖျောပွမယျ့လကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှကေို ပုံမှနျလုပျသှားပေးလိုကျပါ။ ရရှေညျအတှကျကောငျးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှမေို့ မဖွဈမနလေုပျပေးပါလို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ …. ။
အရငျဆုံး လကေ့ငျြ့ခနျးတှမေလုပျခငျ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးလညျးဖွဈ၊ နှလုံးကွံ့ခိုငျမှုလညျးတိုးစတေဲ့ လှကေားအတကျအဆငျးလုပျတာကို ၁၅ မိနဈလောကျလုပျပေးပါ။ ဘာမှထှထှေထေူးထူးလုပျပေးစရာမလိုဘဲ လှကေားပျေါအတကျအဆငျး ၁၅ မိနဈလောကျပုံမှနျလုပျပေးရုံနဲ့ တဈလလောကျကွာတဲ့အခါမှာ ဗိုကျအဆီတှပေါသိသိသာသာကသြှားပွီး ကဈြလဈနတောကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ …. ။
ပထမပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ထိုငျခုံမှာထိုငျပါ။ ခွထေောကျတှကေို ဆနျ့ထုတျလိုကျပွီး ဒူးကိုပွနျကှေးကာရငျဘတျဘကျကိုဆှဲယူလိုကျပါ။ အဲ့ဒါကို အကွိမျ ၂၀ ၊ သုံးခေါကျလုပျပေးပါ။ သှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးစတောကွောငျ့ အညောငျးအညာတှပွေစေတေဲ့အပွငျ ခွထေောကျလေးတှကေိုလညျး သှယျလလြှပစပေါတယျ …. ။
ပုံမှာပွထားတဲ့ပုံစံအတိုငျးနပွေီး ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ဘေးတိုကျ မွှောကျ၊ခြ အကွိမျ ၂၀ လုပျပါ။ ဘယျ၊ညာတလှညျ့စီလုပျပေးရုံနဲ့ ခါးအညောငျးပွစေပွေီး ခါးဘေးကအဆီတှကေိုလညျးကသြှားစတောကွောငျ့ ခါးသေးခငျြတဲ့သူတှလေုပျပေးသငျ့ပါတယျ …. ။
ပကျလကျလဲအိပျနတေဲ့အနအေထားကနေ ခွထေောကျတှကေို တဖွညျးဖွညျးအပျေါဘကျကိုမွှောကျနိုငျသလောကျမွှောကျပေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ကြောကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးပွနျခပြွီး နဂိုအနအေထားအတိုငျးရောကျအောငျပွနျနပေါ။ အဲ့ဒါကို အကွိမျ ၂၀ သုံးခါလုပျပေးပါ။ နောကျကြောဘကျအညောငျးအညာတှပွေစေပွေီး ခါးနောကျက အဆီတှကေစြပေါတယျ ….. ။
ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျးတငျပါးဆုံနရောမှာ အားပွုပွီးခန်ဓာကိုယျကို V ပုံစံဖွဈအောငျနပေါ။ လကျနှဈဖကျကို ဆနျ့တနျးပွီး လကျဝါးနှဈဖကျကိုကပျထားပါ။ ခန်ဓာကိုယျကိုဘယျဘယျလှညျ့ပွီး နဂိုပုံစံအတိုငျးပွနျနပွေီးရငျ ၊ ညာဘကျကို ထပျလှညျ့ပွီး နဂိုအနအေထားအတိုငျးပွနျနပေါ။ဘယျညာတလှညျ့စီ အကွိမျ ၂၀ လုပျပေးပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကိုလုပျတဲ့အခါ ဖွညျးဖွညျးခငျြးလုပျရမှာဖွဈပွီး ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာသှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးမှနျစပွေီး အဆီပိုတှကေစြပေါတယျ …. ။
Previous: သင့်ချစ်သူက ဒီလိုအပြုအမူတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖြတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ..
Next: သမီးဖြစ်သူက အဖေနဲ့ ပြန်ပေါင်းစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်